RASMI: Didier Deschamps oo ku dhawaaqay liiska xidigaha uu kala qeyb gali doono koobka aduunka ee 2018 – Gool FM
(France) 17 Maajo 2018. Macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay liiska ka kooban 23-ka xidig uu kala qeyb gali doono koobka aduunka ee ka dhici doono dalka Russia bisha soo aadan.
Hadaba magacyada ugu muhiimsan ee liiska xidigahan aanu kusoo bixin waxaa ugu muhiimsan difaaca kooxda Arsenal Laurent Koscielny oo dhaawac darani uu dhawaan kasoo gaarin dhanka jilibka.
Didier Deschamps ayaa wuxuu liiskan ka saaray xidiga kooxda Marseille ee Dimitri Payet, sababa la xiriira inuu soo gaaray dhaawac inta uu socday kulankii xalay ee finalka Europa League ay Atletico Madrid ku qaaday 3-0.
Deschamps ayaa wuxuu yiri: “Payet wuxuu si buuxda ugu sharaxnaa booskiisa koobka aduunka, laakiin dhaawaca noocan ah wuxuu inta badan qaataa seddex isbuuc si uu u soo kabsado”.
Hadaba liiska xidigaha xulka qaranka france ee ka qeyb gali doona koobka aduunka 2018 ka dhici doono dalka Russia ayaa waxaa ku soo baxay xidigahan:
Goolhaayaasha: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (PSG)
Difaacyada: Djibril Sidibé (AS Monaco), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (Marseille), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City)
Khadka Dhexe: Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kanté (Chelsea FC), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N’Zonzi (Sevilla), Thomas Lemar (AS Monaco)
Weerarka: Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (Chelsea FC), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fékir (Lyon), Florian Thauvin (Marseille).
RASMI: Fernando Santos oo soo saaray liiska xidigaha xulka Portugal uu kala qeyb gali doono koobka aduunka 2018.